Mpanamboatra famenon-tsakafo fahasalamana - familiam-bokatra Wisepowder
Rehefa mampitaha an'i Pterostilbene Vs Resveratrol ianao dia ho tsapanao fa maro ny zava-misy tsy hitanao momba azy roa. Ny fiainana fiainana salama dia mitaky ny hanomezanao hevitra momba ny sakafo mahasalama, fampihetseham-batana miaraka amin'ireo fanafody mety. Na izany aza, mety hitantsika izany rehetra izany, fa ny olana sasany toy ny olan'ny neurolojia dia mety maharitra. Ankoatr'izay, tokony ho azonao… Continue Reading
2020-08-26 ibeimon fanampin-tsakafo
Glutathione dia mandray soa amin'ny zavamananaina amin'ny lafiny maro amin'ny alàlan'ny fiasa ho antioksida. Izy io dia fitambaran'ny asidra amine misy ao amin'ny sela olombelona rehetra. Ny zavamananaina rehetra dia manana glutathione amin'ny vatany. Izy io dia antioxidant mahery izay rehefa misy ambaratonga ampy dia afaka miaro antsika amin'ny toe-pahasalamana mampidi-doza toy ny aretin'i Alzheimer, aretim-po, ary… Continue Reading
2020-06-06 ibeimon fanampin-tsakafo
Inona no alaina masom-bary mena masira mena (RYRE) natao rehefa karazana bobongolo manokana fantatra amin'ny anarana hoe Monascus purpureus manondrana vary. Nanjary mena mainty ny vary ary mamokatra fitambarana simika fantatra amin'ny hoe monacolin K izay misy lanja ara-pahasalamana. RYRE dia anisan'ny TCM (fitsaboana nentim-paharazana sinoa) mihoatra ny… Continue Reading
2020-05-20 ibeimon fanampin-tsakafo
Inona ny nalaina avy amin'ny tongolo mainty? Ny fakana tongolo lay mainty dia karazana tongolo lay izay nalaina avy amin'ny fanamasinana sy fahanton'ny tongolo lay vaovao. Ny fitsaboana ny tongolo gasy vaovao hamokarana tongolo gasy mainty dia tanterahina amin'ny toetr'andro tena mando misy hafanana ambony manomboka amin'ny 40 ° C ka hatramin'ny 60 ° C mandritra ny folo andro eo ho eo. Miaraka amin'ireto fepetra ireto,… Continue Reading
2020-05-14 ibeimon Category hafa, Antiaging, Nootropics, Products, fanampin-tsakafo
Inona no atao hoe Resveratrol? Resveratrol dia fitambaran'ny zavamaniry polyphenol voajanahary izay miasa toy ny antioksidan. Ny loharanom-pahalalana resveratrol dia misy divay mena, voaloboka, voaroy, voanjo ary sôkôla mainty. Io fitambarana io dia toa mifantoka be amin'ny voa sy ny hoditry ny voaroy sy ny voaloboka. Ny voa sy ny hoditry ny voaloboka dia apetaka amin'ny fanangonana divay resveratrol, ary… Continue Reading
2020-05-05 ibeimon fanampin-tsakafo
Inona ny atao hoe Anandamide (AEA)? Ny anarana Anandamide (AEA) dia avy amin'ny teny Ananda izay midika hoe mamokatra fahasambarana. Izy io dia endocannabinoid izay voasokajy ao amin'ny vondrona amides asidra matavy. Amin'ny rafitra, izy io dia manana endrika molekiola mitovy amin'ny an'ny tetrahydrocannabinol (THC), ilay fitambarana mazoto amin'ny rongony. Matetika dia ny vatana no mamokatra azy… Continue Reading
2020-04-28 ibeimon fanampin-tsakafo
Ny tombotsoan'ny Lithium Orotate ambony indrindra amin'ny fahasalamanao
Ny atao hoe Lithium Orotate Ny Lithium orotate dia fitambarana izay amboarina avy amin'ny metaly alkaly fantatra amin'ny hoe lithium izay fampiasa mavitrika ary asidra orotika izay molekiola mpitatitra. Ny asidra orotic dia voajanahary ao amin'ny vatana. Ny Lithium orotate dia misy amin'ny endrika fanampiny ary ampiasaina amin'ny natiora… Continue Reading
2020-04-17 ibeimon fanampin-tsakafo
Cycloastragenol (CAG): Tombontsoa, ​​fatra, lafiny sampana
1. Inona no atao hoe Cycloastragenol (CAG) Cycloastragenol dia saponin voajanahary nalaina ary nodiovina avy amin'ny foton'ny ahitra Astragalus membranaceus. Ny zavamaniry astragalus dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana sinoa nentim-paharazana (TCM) nandritra ny taonjato maro ary mbola ampiasaina amin'ny fanafody raokandro isan-karazany. Astragaloside IV no akora ilaina amin'ny astragalus membranaceus, misy amin'ny kely… Continue Reading
2020-04-10 wisepowder fanampin-tsakafo
Loidic Linoleic asidra (KENY): Tombontsoa, ​​fatra, lafiny lafiny
1. Inona ny asidra linolejika mifangaro (CLA)? Ny asidra linoleic Conjugated (CLA) dia karazan-java-matavy misy asidra omega-6 matavy. Ny loharanon-tsakafo asidra linoleika mifangaro dia ny hena sy ronono avy amin'ny tsiranoka toy ny omby, osy ary ondry. Ny totalin'ny CLA amin'ny sakafo dia miankina amin'ny sakafom-biby… Continue Reading
2020-03-27 wisepowder fanampin-tsakafo
Inona ny quinone Pyrroloquinoline (PQQ)? Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) dia molekiola quinone kely misy fananana toy ny vitamina toy ny vovo Dihexa (PNB-0408). Ny fitambarana dia mpandraharaha redoks mahery vaika izay mihamitombo ho toy ny antioxidant. Noho izany, dia miorina tokoa izy io ary misy dikany ara-panafody amin'ny fitsaboana ny neurodegeneration. Fikarohana ara-pitsaboana marobe no manamafy ny quinone pyrroloquinoline (PQQ) ho matanjaka… Continue Reading
2020-03-19 wisepowder fanampin-tsakafo